Bokin'i Zefania - Wikipedia
Ny Bokin'i Zefania na Bokin'i Sôfônia dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Io boky io dia mirakitra ny faminanian’i Zefania na Sôfônia. Nieritreritra ny vahoakan’i Joda fa amin’ny andro ho avy dia hahatonga azy ireo ho firenana matanjaka Andriamanitra ka ho afaka mandresy ireo fahavalony sy hampanjaka ny fahamarinana sy ny fiadanana. Diso anefa ny fiheverany, fa hosazin’Andriamanitra ny vahoakan’i Joda sy ny firenena rehetra izay tsy nanaja azy. Izany no andro fitsarana, andron’i Iahveh. Ny hany fomba hanafahana an’i Joda dia ny fanajana an’Andriamanitra sy ny fivavahana aminy irery ihany.
Isan'ireo atao hoe mpaminany madinika roa ambin'ny folo ao amin'ny sokajy Bokin'ny mpaminany amin'ny Baiboly kristiana i Zefania fa ao amin'ny Nevi'im kosa izy ao amin'ny Tanakh.
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe ספר צְפַנְיָה / Sefer Tsĕphanyāh ny Bokin'i Zefania. Ao amin'ny Septoajinta amin'ny teny grika izy dia atao hoe Σοφονίας Θʹ / IX Sofonías (ny teta Θʹ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahasivy azy).
I Zefania na Sôfônia dia naminany tamin’ny andron’i Josia (640-609 tal. J.K.), mpanjakan’i Joda. Nanohitra ny fomban’ny firenena vahiny sy ny fivavahana amin’ny andriamani-tsy izy ny mpaminany. Nanakiana ireo mpitondra fanjakana koa izy. Ny toriteny nataony dia niseho tamin’ny taona 640-630 tal. J.K., taloha kelin’ny fotoana niasan’i Jeremia. Teo ambany fanaraha-mason’i Asiria i Joda tamin’ny fotoan’ny mpanjaka tsy nivavaka, dia i Manase sy i Amona. Nihanalemy anefa i Asiria ka nisy ny tsirim-panantenana taty aoriana. Tamin'izany no nivoahan'ny faminanian'i Zefania.
Ny Andron'i Iahveh : androm-pamaizana (1.2 – 2.3)[hanova | hanova ny fango]
Ny fitsarana ny firenenan rehetra (2.4 – 3.8)[hanova | hanova ny fango]
Ny fampanantenana ho an’ny firenena rehetra (3.9 – 3.20)[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27i_Zefania&oldid=975866"
Voaova farany tamin'ny 20 Oktobra 2019 amin'ny 17:27 ity pejy ity.